Road Map_XH_I-MAPHU YENDLELA | PIVX
Isikhwama se zPIV esiya endaweni
Abasebenzisi abayi kusayi kuqhubeka ukugcina izixhobo ezintsha emva kweemveliso zPIV nganye. Ngokuxhasa imbewu ye-zPIV (efana nesitsixo sangasese), abasebenzisi baya kuba ne-backup epheleleyo yeliphi i-zPIV echazwe kwixesha elizayo, kwaye bayakwazi ukungenisa ngokulula imbewu ye-zPIV kwisikhwama esitsha kunye nokubuyisela nayiphi na i-ZPIV evezwe ngembewu.
Abasebenzisi baya kukwazi ukugxininisa i-ZPIV nje nge-PIV eqhelekileyo, kodwa banokufumana umvuzo ophezulu kunye nokwandisa ubumfihlo kwaye kulula ukusebenzisa. Ngesicwangciso somvuzo omtsha esicetywayo, umvuzo we-block ye-zPIV uza kuba ngama-50% amakhulu kunokuba iPIV izenzele umvuzo. Nangona i-PIVX sele sele ilandelwe ukuphakama kwamagama angaphezulu kwezona zinto zingabonakali ngaphezu kweemali zemali zobumfihlo, kunye nexesha lokuvuthwa ukukhusela ukuhlaselwa kwexesha, i-zPIV staking iyakwandisa ngakumbi ubumfihlo ngokuqinisekisa imveliso ye-zPIV kunye nokusetyenziswa kwezinto zenzeke ngokuphindaphindiweyo.
Emva kweenyanga zokuvavanya ngokukhawuleza, iOS PIVX Mobile Wallet eyayilinde ixesha elide, yagilwa ngu-Apple. Sisebenza ngeempendulo zabo, ukuze sikwazi ukuyibuyisela kwakhonangokukhawuleza
I-QT Wallet Design entsha
I-PIVX Qt isikhombisi-sikhombisi somsebenzisi wesigcawu siya kulungiswa kwaye unikezelo olulula kwiinketho ezifana ne-zPIV auto-minting, ukugcinwa ngokuzenzekelayo kwindlela yokugcina yangaphandle, kunye nomgca wokuzihlukanisa ngokuzenzekelayo.
Kwi-Tablet Propositional Tab
Abasebenzisi baya kuba nako ukwenza yonke imisebenzi yolawulo lwe-PIVX ukusuka ngaphakathi kwi-QT isikhombisi somsebenzisi. Akukho mfuneko yokufikelela kwiwebhusayithi okanye ukuvota kwi-console ye-debug.
KwiTebhu yokuVotela kweWallet
Abasebenzisi baya kukwazi ukuvota ngokuzenzekelayo kuzo zonke iziphakamiso ze-PIVX ezisuka kwi-QT isikhombisi somsebenzisi. Akukho mfuneko yokufikelela kwiwebhusayithi okanye ukuvota kwi-console ye-debug.
Ukugcinwa ngokuzenzekelayo kumadivayisi okugcina angaphandle
Okwangoku, i-wallet inokwenza kuphela iifayile ezizenzekelayo kwi-PIVX yangaphambili. Emva kokuphunyezwa, isikhwama se-PIVX siza kuvumela abasebenzisi ukuba bakhethe indawo zokugcina ezizenzekelayo, ezifana nezixhobo zokugcina zangaphandle.
I-Ledger Hardware Hardware I-Masternode Support Partnership Support
Ukugcina izitshixo zangasese kwi-hardware isikhwama kwiimeko ezingaxhunyiwe kwi-intanethi, okanye ukugcinwa okubandayo, kunika izinga eliphezulu lekhuseleko. Olu hlobo luya kuvumela i-masternode yokudibanisa i-PIVs ukuba ikhuseleke kwisixhobo seLedger, ngelixa linye isebenza ngamasternodes, ifumana imivuzo, i-ZDEX yokuthengwa kwemali, kunye nokuvota.
Lewebhusayithi iza kuhlaziywa ngokupheleleyo kunye nokuhlaziya okuhlambulukileyo kunye nokuhlaziya kweso sikhokelo. Kuya kubakho ukuhlaziywa koluphawu olutsha lwekhredithi kunye newebhusayithi, usebenzisa i-typography efanayo ukudibanisa iiplani ezintsha.
I-ZPIV yokuTshintshiselwa kweSithili (zDEX)
Isikhwama esikhulu se-PIVX siya kunika ngokutsha ngokuchanekileyo kunye nokungabonakali kwintengiso ye-zPIV kunye neB Bitcoin. Oku kuya kusebenza ngokungena ngqo nakwi-PIVX esuka eB Bitcoin ngaphandle kwababhalisi. Imirhumo yokuhweba esuka kwi-zDEX iya kuvuzwa kwiZDEXNodes (ii-masternodes ezikunceda nokukhusela i-ZDEX), ukuthenga okukhuthazayo kunye nokugcinwa kwexesha elide le-PIV ngemali engenayo. Akukho ukubhaliswa, akukho idilesi ye-IP yokungena, kwaye akukho banikezelo lwemali kwiinkonzo zamaseva.
Ulawulo loLuntu oluCwangcisiweyo
Ngo-2017, abanikazi be-masternode bavota ngokuvakalayo ukubuyisela amandla okuvota kwakhona. Njengamanje, abanini be-masternode kuphela abanokuvota. Iziphakamiso ezininzi ze-CDG zithunyelwe, kwaye ziya kuvotelwa, kwaye isiphakamiso sokuphumelela siya kuphunyezwa njengenkqubo ye-PIVX yokulawula.
Ubukhulu beBlock Sizes
Ubungakanani bebhloko bulungelelanisa ukufunwa ukuqinisekisa ukuba ukuthengiswa okukhawulezayo kunokwenzeka, nangona ngexesha leentshukumo kunye nokuhlaselwa kwenethiwekhi. I-PIVX iya kukwazi ukulinganisa kunye nokwamkelwa kwabathengi.
I2P Inxibelelwano lweNethiwekhi
I2P yintanethi engabonakaliyo esebenzisa imodeli yohlobo lwabahlobo oluthile. Unamathuba amaninzi aphambili kwezobugcisa ngaphezu kweminye imodeli efana ne-TOR, kwaye ihamba ngokukhawuleza, ikhuselekile, kwaye inamandla.
Ukufikelela kwisikhwama sakho se-PIVX sinokukhuselwa ngephasiwedi kunye nokhuseleko lwe-FIDO U2F, ukukhusela ngokukhuselekileyo kubadlali bee-keyboggers. Ikhredithi iya kubonisa imiyalelo yokuseta kwiidivayisi eziqhelekileyo ze-U2F, ezifana neYubiCo YubiKey kunye neLedger Nano S.
Idandelion Protocol Integration
Iprotocol yeDandelion yenza iiplani ze-IP zithumelele zingabonakali. Ukuthengiselana okuhanjiswe kwiinombolo kuhamba ngenani elingalindelekanga leqonga kwi-“stem” isigaba, kwaye sisasazwa ngokulinganayo kwiindawo ezininzi kwiqendu elithi “fluff”. Nangona umhlaseli echaza indawo yesigaba esiphulayo, kunzima kakhulu ukufumanisa i-IP yesigcawu sokuqala kwisigaba se-stem.